Shirkada Turkiga ee Favori oo 15 September ee sanadkaan kala wareegi doonta Maamulka Airport Muqdisho shirkada SKA – idalenews.com
Shirkada Turkiga ee Favori oo 15 September ee sanadkaan kala wareegi doonta Maamulka Airport Muqdisho shirkada SKA
Shirkada hawlaha Airporka lagu wareejinayo ayaa lagu magacaabaa FAVORI LLC waana shirkad Turki ah, qorshahan lagu wareejinayo maamulida airporka shirkadaasi ayaa bishii June la horgeeyey Golaha Wasiirada ee Dowlada Federaalka.
Maanta oo Axad ah ayuu wasiirka Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Cabdullahi Ciilmooge Xirsi magaalada Muqdisho kula kulmay mas’uuliyiinta ka socota shirkada FAVORI iyo SKA, kulankaasi oo looga hadlayey sidii shirkada cusub hawlaha qaar ulla wareegi lahayd, ayaa waxaa sidoo kale kasoo qeyb galay saraakiisha ciidamada AMISOM oo iyagu dhanka amaanka qaabilsan Airporka.
Shirkada FAVORI ayaa lagu wadaa in si rasmi ah xilka Airporka Muqdisho ulla wareegto 15ka bisha September ee sanadkan, waxayna shirkadan dib u dhis ku sameyn doontaa sida la sheegay guud ahaan airporka Muqdisho.
Nashqada shirkada FAVORI ee Dhismaha cusub ee Airporka Muqdisho
Shirkada FAVORI ayaa sheegtay inay gebi ahaan bedali doonto Terminalka airporka Muqdisho isla markaana casriyeyn doonto qeybaha kala duwan ee Airporka ka kooban yahay qorshahaasi oo kamid ahaa qorshii Wasiirka Warfaafinta iyo Isgaarsiinta uu horgeeyey Baarlamaanka Federaalka dhamaadkii bishii lasoo dhaafay ee Luulyo (July).
Daawo: Ganacsatada Suuqa Xoolaha Beledweyne oo lacago faalso ah looga gatey xoolihii suuqa ay keeneen
Madaxweynaha Somalia oo kulan la qaatey madaxweyneyaasha Itobiya, Kenya iyo Uganda